परदेशमा नेपाली चाडपर्व | himalayakhabar.com
हिमालयखबर | 5th Oct 2019, Saturday | २०७६ आस्विन १८, शनिबार ०५:४६
नेपालीको मौलिक एवम् राष्ट्रिय पर्व बडादसैं स्वदेश एवम् विदेशमा धुमधामका साथ मनाउने गरिन्छ । नेपालमा दसैंलाई परम्परागत शैलीका साथ विशेष रूपमा मनाइन्छ भने विदेशमा रहेका नेपालीले पनि यो पर्वलाई व्यस्तताको बाबजुद निकै महत्वका साथ मनाउने गर्छन् । यो पर्व नेपालीबीच भाइचाराको रूपमा समेत प्रवर्धन हुँदै आएको छ ।
दसैंको पूर्वसन्ध्यामा राजधानी काठमाडौंलगायत विभिन्न सहरबाट ठूलो संख्यामा मानिसहरू जन्मथलोतिर फर्किने गर्छन् । साथै, रोजगारीका सिलसिलामा मलेसियालगायत विभिन्न खाडी मुलुकमा गएकाहरू पनि दसैंको मौका पारेर परिवारसँग खुसी साट्न स्वदेश फर्कने गर्छन् । यस्तै, स्वदेश फर्कनका लागि बिदा नपाउनेहरूले भने आफ्ना परिवारलाई दसैंमा खुसी बनाउन पैसा पठाएर चित्त बुझाउने गर्छन् ।
दसैंले रोजगारी तथा व्यापार–व्यवसाय गर्न परिवार छोडेर बाहिर गएकाहरूलाई घर फर्काएर सपरिवारबीच दुःखसुख साट्ने, मीठो–मसिनो खाने, पिङ खेल्ने, इष्टमित्रसँग भेटघाट एवम् रमाइलो गर्ने अवसर जुटाउने गरेको छ । विजयादशमी अर्थात् टीकाको दिन अभिभावक तथा मान्यजनबाट निधारभरि टीका अनि शिरमा जमरासहित आशीर्वाद लिने गरिन्छ । यो पर्वमा पाँच दिनसम्म आफन्तजन तथा गण्यमान्यकहाँ गएर टीका एवम् आशीर्वाद लिने परम्परा रही आएको छ ।
यस्तै, अमेरिका, अस्ट्रेलिया, जापान, क्यानाडा, कोरिया, युरोपलगायतका देशहरूमा रहेका नेपालीहरू भने दसैं मनाउने नाममा कमै मात्र स्वदेश फर्कने गर्छन् । विदेशमा रहेका नेपालीको कथा–व्यथा अलि फरक हुने गर्छ । यी देशहरूमा रहेका नेपालीहरूलाई कामको चाप र समय व्यवस्थापनको कठिनाइका कारण नेपालमा जस्तो फुर्सदिलो भएर दसैं मनाउने अवसर हुँदैन । यहाँ रहेका धेरै नेपालीको साथमा आफन्त नहुँदाको पीडा त छँदै छ साथै सबै नेपाली एकै ठाउँमा भएर रमाइलो गर्ने अवसर पनि कमै मात्र मिल्ने गर्छ । रोजगारी तथा व्यवसायका लागि मिनेट–मिनेटको महत्व हुने हुँदा विदेशमा रहेका नेपालीहरूको दसैं विगतको सम्झना र पारिवारिक यादका बीचमा बित्ने गर्छ ।
सामाजिक सञ्जालमार्फत शुभकामना बाँडेर मनलाई शान्त बनाउन खोज्ने नेपालीको संख्या पनि विदेशमा कम छैन । यसैगरी, आफ्नो परिवारबाट टाढा हुँदाको पीडा सहँदै बसेका र आफ्नो घरमा आमाले पकाएको परिकार सम्झेर मन भारी बनाउनेको संख्या पनि उत्तिकै छ, विदेशमा । जस्तोसुकै परिस्थितिको सामना गर्नुपरे पनि विदेशमा बस्ने नेपाली समुदायले आफ्नो देशको संस्कार एवम् पहिचानलाई जीवन्त राख्न कुनै कसुर बाँकी भने राखेका छैनन् । दसैं, तिहार, छठ, लोसार, माघीजस्ता पर्वलाई उत्तिकै महत्वका साथ प्रवर्धन गर्दै आएका छन् । नेपालको पहिचान बोकेका मठ–मन्दिर, गुम्बालगायत विभिन्न सम्पदा स्थापना गरेर विदेशी भूमिमा जीवन्त राख्नुका साथै विश्वमाझ नेपाललाई चिनाउने कार्यमा नेपालीहरू सधैं अग्रसर हुने गरेका छन् ।
हामी सम्पूर्ण नेपाली स्वदेश तथा विदेश जहाँ रहे पनि एकअर्काबीच दसैंको खुसी बाँडौं । नेपाली चाडपर्वलाई आफ्नै ढंगले हर्षोल्लासका साथ मनाऔं । सम्पूर्ण नेपालीबीच सकारात्मक सोचका साथ भाइचाराको सम्बन्ध कायम गरौं । आमनेपालीको जीवनमा दसैंको टीका, जमरा र आशीर्वादले थप ऊर्जा मिलोस्, सफलताका आयामहरू थपिँदै जाऊन् । टीकाको दिनमा हरेक घरदैलोभित्र बन्ने अक्षता शुभ बनून् । विजयादशमी २०७६ को अवसरमा स्वदेश तथा विदेश रहनुभएका सम्पूर्ण नेपाली मनहरूमा सु–स्वास्थ्य, दीर्घायु एवम् उत्तरोत्तर प्रगतिको हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु ! दुर्गा भवानीले सबैको कल्याण गरून् !!